UNelson • Ukuhlikihla umzimba kanye neNuRu Massage
INelson City inqunyelwe entshonalanga naseningizimu nentshonalanga nguMkhandlu Wesifunda saseTasman nasenyakatho-mpumalanga, empumalanga naseningizimu nasempumalanga nguMkhandlu Wesifunda iMarlborough. Idolobha alihlanganisi iRichmond, okuyindawo yokuhlala yesibili ngobukhulu kule ndawo. INelson City inabantu abangaba ngu-50,000 12, okwenza kube idolobha laseNew Zealand eliyi-15,000 elinabantu abaningi kakhulu. Uma ihlanganiswe nedolobha laseRichmond, elinabahlali ababalelwa ku-9, wonke lo mphakathi ubalwa njengendawo yasedolobheni laseNew Zealand lesishiyagalolunye ngobukhulu babantu.
CURRENCY Idola le-NZ
ulimi IsiChamorro, isiNgisi